यस कारण गर्छन् मानिसहरु आत्महत्या ? - Sagarmatha Online News Portal
यस कारण गर्छन् मानिसहरु आत्महत्या ?
व्यक्तिपिच्छे यसको कारण अलग अलग हुन्छ । किनकी हरेक व्यक्तिको आ(आफ्नो छुट्टै स्वभाव निर्माण भएको छ । त्यहीअनुसार हरेक चीजवस्तुलाई हेर्ने र ग्रहण गर्ने आफ्नै मूल्य र मान्यता छ । त्यही कारणले प्रत्येक व्यक्तिलाई खुसी बनाउने र दुःखी बनाउने चीज, वस्तु वा परिस्थिति अलग-अलग नै हुन्छ ।
– लागू औषध दुव्र्यसन
– भयंकर दुःख या क्षति (प्रियजनको मृत्यु, साथी, पारिवारिक सदस्य वा सामाजिक व्यक्तित्व (जसलाई आफूले विशेष ठानेको हुन्छ) उसको आत्महत्याको खबर
– रिसको आवेगमा
– कुनै पनि समस्या जसको समाधान कतै पनि देखिदैन्
– मानसिक समस्या (डिप्रेशन, बाइपोलार डिसअर्डर, सिजोफ्रेनिया)
– बढी खाने वा नखाने समस्या (इटिङ डिसअर्डर)
– आत्महत्या गर्ने मानिसले देखाउने लक्षण
– आत्महत्या सम्बन्धमा कुरा गर्ने, त्यसको बारेमा लेख्ने गरेको हुन्छ । अरुको लागि उसको कुरा जोकजस्तो लाग्न पनि सक्छ ।
– आत्महत्या गर्नको लागि प्रयोग गरिने साधन (डोरी, चक्कु, विषादि औषधी आदि) तिर बढी आकर्षित हुन्छ । उसले योजना बनाइरहेको हुन्छ, कुन चीजद्वारा सजिलै मर्न सकिन्छ ।
– साथीभाइ, आफन्तसँग बिदा मागिरहेको हुन्छ । परिवारको लागि आफू गएपछि पर्न सक्ने अप्ठ्यारोको लागि पनि सकेसम्म व्यवस्था मिलाउन खोजिरहेको हुन्छ । आफ्ना सामानहरु अरुलाई बाँड्न सक्छ, जुन पहिला आफ्नो स्वामित्वमा राखेको हुन्छ ।
– दुःखी, निराश देखिन्छ ।
– आफ्नो बारेमा लापरवाही हुँदै जान्छ ।
– पहिले खुसीले गर्ने कामप्रति रुचि कम हुँदै जान्छ ।
– धुम्रपान, मद्यपान गर्ने गरेको छ भने अझै बढी प्रयोग गर्न थाल्छ ।
– अरुबाट अलग्गिने, एक्लै बस्न रुचाउने हुन थाल्छ ।
– आफूप्रति घृणाको भाव देखाउन थाल्छ ।
– अचानक खुसी र शान्त देखिन थाल्छ । माथिका लक्षणमध्ये केही लक्षण केही समय अघिदेखि देखिएको छ । एक्कासी खुसी देखियो भने त्यो व्यक्तिले मर्नको लागि पूरै योजना बनाइसक्यो । अब उसले आफ्नो जीवन समाप्त गर्दैछ भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
– आत्महत्या जुनसुकै उमेरका मानिसले पनि गर्छन् । तर पनि विशेषगरि १५ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्मका व्यक्तिले बढी गर्ने गरेको अध्ययनले देखाउँछ । यो उमेर भनेको सिर्जनशील उमेर हो । यस्तो उमेरमा कुनै व्यक्तिले आत्महत्या ग¥यो भने उसको परिवारमा कस्तो अवस्था आइपर्ला यो कुरा सोच्न पनि गाह्रो हुन्छ । मर्ने इच्छा कसैलाई हुँदैन तर पनि मानिसले आफैँलाई मार्न तयार हुन्छ, चाहे जुनसुकै कारणले किन नहोस् । यसलाई रोकथाम गर्नु अति नै आवश्यक छ ।
आत्महत्या रोकथामको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो काम भनेको आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले देखाउने लक्षणका बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । कुनै पनि व्यक्तिले एक्कासी आत्महत्याको प्रयास गर्दैन । विभिन्न अनुसन्धानअनुसार आत्महत्या गर्ने व्यक्तिमध्ये ८०(९० प्रतिशतले कुनै न कुनै लक्षण देखाएको हुन्छ । बाँकी केहीले रिसको आवेगमा आएर वा बालबालिकाको हकमा जिज्ञासाको कारणले पनि आत्महत्या भएको पाइएको छ । त्यसैले परिवारको सदस्य वा साथीभाइमा यस्ता लक्षणहरु देखिन थालेमा उक्त व्यक्तिलाई सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
साथीभाइ तथा परिवारका कुनै पनि सदस्यमा यदि यस्ता किसिमका कुनै लक्षण देखिन थालेमा उक्त व्यक्तिसँग उसको समस्याको बारेमा सोधपुछ गर्नुपर्छ । सोधपुछ गर्ने व्यक्तिलाई समस्या भएको व्यक्तिले विश्वास गर्ने पनि हुनुपर्छ । विश्वासिलो व्यक्तिलाई मात्र मनको कुरा पोख्न सक्छ । त्यसैले उसका समस्याका बारेमा राम्ररी धैर्यताका साथ सोधपुछ गर्नुपर्छ । जस्तैस्आत्महत्याको विचार कहिलेदेखि आउन थाल्यो ? दिनमा यस्तो विचार कति पटक आउँछ वा कहिले कहिले आउँछ ?
आत्महत्याको सबभन्दा ठूलो कारक तत्व भनेको डिप्रेशन हो । हालसम्मको रिसर्चअनुसार आत्महत्या गर्ने व्यक्तिमध्ये ८० प्रतिशत डिप्रेशनको शिकार भएको पाइएको छ । डिप्रेशनको औषधी खाइरहेको बेलामा आत्महत्याको विचार घट्नुको सट्टा झन बढ्न सक्छ । त्यसैले पहिलो पटक डिप्रेशनको औषधी खुवाइरहेको छ वा मात्रा परिवर्तन गरिएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । किनकी औषधीले पनि आत्महत्याको विचार आउन सक्छ । सुरुका २ महिना आत्महत्याको खतरा बढी हुने सम्भावना हुन्छ । औषधी खाइरहेको छ अब केही हुन्न भनेर ढुक्क हुनुहुँदैन ।
– यदि सहयोग चाहिएमा निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्नसक्नुहुन्छ
– महाराजगन्ज टिचिङ अस्पतालको साइकोलोजी डिपार्टमेन्ट
– मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, पाटन
– अथवा आफ्नो पहिचानमा भएका मेन्टल हेल्थ प्रोफेशनलहरु
आत्महत्या आफैंमा एउटा जटिल समस्या भएपनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि एक व्यक्ति वा संस्था पर्याप्त हुँदैन । देशका सम्पूर्ण अंगहरु जस्तै सरकारको माथिल्लो तहमा रहेर नीति निर्माण गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने स्थानीय सरकार लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, कानुन सबै क्षेत्रबाट उचित समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । तब मात्र हामीले आशातीत सफलता हासिल गर्न सक्छौं । साभारः कान्तिपुर साप्ताहिकबाट